မိုးစက်တွေကြားထဲက Double U နှင့် အမေးအဖြေများ …
Sai Win : အစ်ကို့အနေနဲ့ လက်ရှိစီးနေတဲ့ ကားအမျိုးအစားနဲ့အရောင်က ဘာများဖြစ်မလဲ …?
Double U : လက်ရှိစီးနေတာကတော့ Crown Majesta 2005 အမဲပါ။
Sai Win : ဒါဆို လက်ရှိစီးနေတဲ့ကားရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအချက်နဲ့ မကြိုက်ဆုံးအချက်လေးပြောပြပေးပါလား …?
Double U : အစကတော့ ကျွန်တော်က Toyota သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Crown Majesta ပြီးတော့ Celsior အဲဒီလိုမျိုးကားပေါ့။ ကျွန်တော်က အမဲကြိုက်တာကိုး။ အဲဒီလို ကားအကြီးကြီးတွေ၊ အမဲတွေ ပြီးတော့ အင်ဂျင်ခပ်ကြီးကြီးနဲ့ နည်းနည်းငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းရှိမယ့်ဟာတွေ၊ အခုက လေအိတ်နဲ့ဆိုတော့ ရှော့ဘားတို့ဘာတို့ထက်စာရင် ပိုပြီးတော့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ ပိုဇိမ်ရှိတယ်ပေါ့။
Sai Win : ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မောင်းတတ်လဲ …?
Double U : ကျွန်တော်က နဂိုကတည်းက ကားမောင်းရင် အရမ်း ပရမ်းပတာမောင်းတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အေးဆေးပဲမောင်းတယ်။ ကားပေါ်မှာလည်း သီချင်းအေးအေးဆေးဆေး နားထောင်ပြီး မောင်းတဲ့သူဆိုတော့ လက်တစ်ဖက်ထဲမောင်းဖြစ်တာများတယ်။ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလုပ်ချင်ရာလုပ်နေတယ် (ရယ်လျက်)။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ဖုန်းသုံးချင်သုံးနေတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို မောင်းဖြစ်တာများတယ်။
Sai Win : ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုသီချင်းတွေနားထောင်ဖြစ်လဲ …?
Double U : ကျွန်တော်အများဆုံးနားထောင်တာ Jazz Music ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အခု သီချင်းတီးစရာတွေရှိတယ်ဆိုရင် နားထောင်ဖြစ်တာတော့ movie scores တွေ songtrack တွေပေါ့။ ကျွန်တော့်ကားပေါ်မှာဆိုအမြဲတမ်း၊ ကျွန်တော့်ကားပေါ်တက်လာရင် ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တာမျိုးပဲကြိုက်တယ် ဆူညံဝုန်းဒိုင်းကျဲတာမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူး ။
Sai Win : တကယ်လို့များ ကားအသစ်တစ်စီးဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကားအမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ဖြစ်မလဲ …?
Double U : မကြိုက်တာက .. နည်းနည်းအသက်ကြီးလာလို့လားမသိဘူး။ တခြားဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းကားမျိုးတွေမကြိုက်တော့ဘူး။ ငြိမ်ဆိမ်တဲ့ကားမျိုးပေါ့။ SUV ကိုတော့ ခရီးသွားဘာသွားလောက်ပဲသဘောကျတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ Sedan ပေါ့နော်။ Sedan ကိုမှ President တို့ Century တို့လို အဲဒီလိုကားမျိုးတွေစီးချင်တာ။ ဂျာမန်ကားတွေကတော့ ကိုယ်လည်းပြင်ဆင်စရိတ်အများကြီးမတတ်နိုင်တော့ မမှန်းရဲဘူး တကယ်စီးချင်တာကတော့ Mercedes ပေါ့။
Sai Win : ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုအမှတ်တရတွေများရှိခဲ့ဖူးသလဲ .. နည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလား …?
Double U : အမှတ်တရတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ ပြောပြရရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးစီးတဲ့ကားတွေတုန်းကဆို Publica တို့ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီကောင်လေးတွေဆို အမှတ်တရလေးတွေရှိတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အကုန်လုံးက Honda Fit တွေစီးနေကြပြီ။ အဲဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်က Publica လေးနဲ့ပေါ့နော်။ အဲဒီတုန်းကတည်းကလည်း Publica steering က အရမ်းကျပ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က manual မောင်းနေရင်းနဲ့ ဖုန်းနဲ့ SMS တွေပို့နေတာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်။ (ရယ်လျက်)
Saiwin : ဒါဆို ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကြုံခဲ့ရတဲ့ Accident တွေရော ရှိဖူးသလား …?
Double U : အရမ်းကြီးကြီးမားမားကိုယ်က ဝင်တိုက်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ဆုတ်ရင်းနဲ့ ပန်းအိုးထိတာတို့၊ ဖင်ထိတာတို့ အဲဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ အမြဲတမ်းက ကိုယ့်ကိုလာတိုက်တာပဲ များတယ်။ အရင်ကားတုန်းကဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတာ ကျွန်တော့်ကားကိုအရက်မူးပြီးတော့ ဝင်တိုက်သွားတာ (ရယ်လျက်)။ လတ်တလောတင်ပဲ ကျွန်တော်ကားက မီးပွိုင့်မှာ လမ်းကြောမှန်တယ်၊ မီးစိမ်းမှာထွက်လာတာကို ဟိုဘက်က မီးနီဖြတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘေးတစ်ခြမ်းလုံးကို ဝင်တိုက်သွားတာမျိုးရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးပေါ့။
Sai Win : လက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ပရိသတ်သိအောင်ပြောပြပေးပါလား …?
Double U : အခုလက်ရှိက ကျွန်တော့်ရဲ့ Native EP ပေါ့နော် စက်တင်ဘာထဲမှာ ထွက်ဖို့လုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကား တီးဖို့ရှိနေတယ်။ Confidential ဖြစ်တော့ နာမည်တော့ပြောလို့မရသေးဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထွက်မယ့် single သီချင်းလေးတွေရှိမယ်။ ပြီးတော့ New Year Myanmar Premium Countdown လာအုံးမှာ။ အဲဒီကျရင် မနှစ်ကလိုပဲ ခမ်းနားတဲ့ဟာတစ်ခု လုပ်ပြဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် အဲဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်။
Sai Win : နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကားချစ်သူနဲ့ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တဲ့အမှတ်တရစကားလက်ဆောင်လေးပြောပေးပါအုံး …?
Double U : ကားကတော့ အကုန်လုံးမှာ သူ့အကြိုက်နဲ့သူရှိတာပေါ့နော် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းထဲမှာလည်း ကားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိသလို၊ တကယ့် grade မြင့်တဲ့ကားစီးတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အကုန်လုံးက ကားကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့မောင်းစေချင်တယ် ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် သိတဲ့အတိုင်းပဲ အချို့က ညဘက်တွေကျရင် ပရမ်းပတာတွေ မောင်းတတ်ကြတယ်ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလေးမောင်းစေချင်တယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း အရမ်း ပရမ်းပတာမမောင်းဘူး။ ဘယ်လောက်မူးမူး အမြဲတမ်း ရအောင်ထိန်းမောင်းတယ်။ မမောင်းနိုင်ရင် လမ်းဘေးချရပ်ထားလိုက်တယ်။ အရမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒုက္ခမပေးဘူး လမ်းစည်းကမ်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလေးတွေ လိုက်နာပြီးမောင်းပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Sai Win : အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Double U ကို ကျွန်တော်တို့ Redline မီဒီယာမှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နှစ်လဲယာဉ်စစ်ဆေးရာတွင် အချို့သောယာဉ်အမျိုးအစားများ၌ ရေကာဖြုတ် ခဲခြစ်စစ်ဆေးရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကညနမှ အသိပေးပန်ကြားထား
ရန်ကုန်- ဒလတံတား တည်ဆောက်ဆဲကာလတွင် YBS ယာဉ်လိုင်းအချို့ ယာဉ်လမ်းကြောင်းပြောင်းပြေးဆွဲသွားရန် စီစဉ်ထားဟုဆို